ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် လူမှုရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း — မြန်မာဌာန
ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ၄၄ နှစ်ချမှတ်ခံရထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့လက လွတ်မြောက်လာပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဇာတိဖြစ်တဲ့ ကျောက်တန်းမြို့ကို ဒီနေ့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး သူလှူဒါန်းထားတဲ့ သိမ်တခုမှာ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ခုလို ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့မှာ ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ ငယ်ဆရာ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးတင့်ဆွေကို နာယကအဖြစ်ထားရှိပြီး ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ဇနီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ၊ သား ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဇော်နိုင်ဝင်း၊ ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်နွယ် စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ။
Narrow space. We hope more than works.
လူမွုေ၇းၿပီးရင္ စီးပြားေ၇း ၿပီး၇င္ နိဳင္ငံေ၇းဘက္ လွည့္လာမွာအေသအခ်ာေပါ့။
အဘခင္ညြန္အားနဂိုကပင္ တပ္တြင္းေရာ။အရပ္ဘက္၊နယ္ဘက္ အေတာ္မ်ားမ်ား သေဘာက်ႏွစ္သက္သည္ဟုထင္ပါသည္။ တရားသေဘာအရ အဘလည္း နဲနဲေတာ့၀ဋ္လည္ၿခင္းကိုခံစားလိုက္ရတယ္ထင္ပါတယ္။ သူ ့အေၾကာင္းနဲ ့သူေတာ့ရွိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ယၡဳလူမူေရးလုပ္ရပ္မ်ားအား ေကာင္းသည္ဟုထင္ပါသည္။ ထိခိုက္နစ္နာေစလိုသည့္သေဘာ လံုး၀ မပါ၀င္ပါ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။